Iran: Tsy hisy mofomamy omena ny vehivavy Iraniana amin’ny andro natao ho azy ireo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Mey 2009 15:15 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, عربي, 繁體中文, 简体中文, Español, English
Na tsy mankato ny andro iraisam-pirenena ho an’ny vehivavy aza ny governemanta Iraniana ary nanàkana ireo vehivavy mafana fo niketrika sy nanoman-javatra ho fankalazana io andro io efa ho 30 taona lasa izay, dia nahatsiaro ny 8 Marsa hatrany ny mpitoraka blaogy Iraniana sy ireo vehivavy mafana fo hanomezam-boninahitra ny vehivavy ao Irana sy manerana ny tany.
Nanao latsakemboka ho an’I Aliyeh Eghdam Doust, vehivavy mafana fo voafonja, ireo blaogy sy tranonkala samihafa toy we-change sy ny feminist school.
Anisan’ireo voasambotra tamin’ny 12 Jona 2006 i Aliyeh Eghdam Doust, nandritry ny hetsika am-pilaminana tao Teheran ary nahazo famonjana telo taona ho setriny. Miasa mafy tokoa ireo vehivavy mafana fo mba hanafàhana azy.
Ny fikambanana Rahavard, ivon-toerana ara-kolotsaina Iranianina ao Alemana, dia nandefa ny karatra firarian-tsoa etsy ambony ho an’i Aliyeh, izay mivaky toy izao: Miarahaba anao sy ireo vehivavy iraniana rehetra voafonja nahatratra ny andron’ny vehivavy.
Namoaka hafatra izay nolazainy fa avy amin'ireo mpitoraka blaogy maro i Deemohsen. Ity hafatra ity dia milaza fa ataon'ny fanjakana anjorom-bala ireo vehivavy ao Irana, ary anentanany koa fa tokony hajaina ny zon’ny vehivavy araka ny fifanarahana iraisam-pirenena nosoniavin’i Iran.
Namoaka sary lehibe momba ny 8 Marsa i Eshterak izay anasàna ny vehivavy hamboraka ny olana mahazo azy ireo satria ny fahanginana = fahafatesana!